Isi uru ise nke iwere Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)
Mbido > Quinone nke Pyrroloquinoline (PQQ)
Cofttek bụ ụlọ ọrụ ọkachamara nke nọ na ahịa kemgbe 2012 ma mara ya maka ngwaahịa ya dị elu. Ihe kachasị mma banyere nke a mgbakwunye bụ na ọ bụ gluten-free na e nwere dịghị nkịtị allergens. Ya mere, ndị mmadụ nwere ike ịnwe ụdị allergens dị iche iche nwere ike iwere mgbakwunye a na-enweghị udo nke uche ha. na Cofttek PQQ mgbakwunye bụ otu n'ime ihe kacha mma Pungroloquinoline Quinone Ihe mgbakwunye dị ugbu a n'ahịa. Ọ bụrụ na ị na-achọ onye anaghị eri anụ ọzọ, anyị na-akwado ịzụrụ mgbakwunye PQQ Energy site na Cofttek.
Pyrroloquinoline Quinone dissdium nnu Ajụjụ
Gịnị bụ Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)?
Pyrroloquinoline Quinone ma ọ bụ PQQ bụ kọlụm dị na osisi yana ọtụtụ nje na eukaryotes cell, dịka yist. PQQ di kwa na mmiri ara nwa mmadu dika soyabean, kiwi, pine, nkpuru osisi, nkpuru osisi, tii na tii. Nnyocha emere na ụmụ anụmanụ ejikọtala enweghi ụkọ PQQ ma ọ bụ PQQ na nzaghachi mgbochi ọrịa, nsogbu uto, arụmọrụ omumu na mbelata ike mgbanwe metabolic.
Ruo ọtụtụ afọ, ndị na-eme nchọpụta chere na Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) bụ ụdị vitamin. Otú ọ dị, nchọpụta e mere n'ime afọ ole na ole gara aga egosila na Pyrroloquinoline Quinone bụ nri nwere àgwà ndị yiri vitamin nke nwere ikike ịme ihe dịka co-factor ma ọ bụ enzyme booster na Mbelata-ọxịdashọn usoro nke gụnyere nnyefe nke electrons n'etiti abụọ umu. N'okwu dị mfe, PQQ na-ejikọ onwe ya na quinoproteins dị na ahụ ma na-arụ ọrụ na mmekorita ya na ha iji kpochapụ ndị nweere onwe ha. Nnyocha nchọpụta chọpụtara quinoproteins ka 100 dị irè karịa Vitamin - C dị ka mgbochi-oxidant. Nnyocha ndị a na-adịbeghị anya egosikwa na PQQ na-emetụta ntụgharị ike na metabolism cellular site na ịba ụba ọnụ ọgụgụ nke mitochondria n'ime ahụ. Ọ bụ eziokwu ndị a dị mkpa kpatara mmụba na mberede nke ewu ewu Pyrroloquinoline quinone n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Kedu ihe pyrroloquinoline quinone na-eme?
Na mgbakwunye na ịbụ ihe na-eto eto na ihe na-akpata nje, pyrroloquinoline quinone (PQQ) na-echebe mitochondria site na nrụgide oxidative ma na-akwalite mitochondriogenesis.
Ego ole ka ị kwesịrị ị takeụ kwa ụbọchị?
Ruo ugbu a enweghị oke ma ọ bụ nke ala ala akwadobeghị Quinone nke Pyrroloquinoline (PQQ) usoro onunu ogwu. Agbanyeghị, nsonaazụ sitere na ọmụmụ anụmanụ na-egosi na onyinye a na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ewere ya dị ka 2 mg. Otú ọ dị, ọtụtụ ihe mgbakwunye nri n'oge a dị na 20 mg na 40 mg, nke a na-ewere dị ka nchekwa dị mma. PQQ kachasị dị n'ụdị capsules, nke a na-adụ ndị mmadụ ọdụ ka ha were na afọ efu. Otú ọ dị, a gwara ndị ọrụ ka ha ghara ịgafe usoro ọgwụ 80 kwa ụbọchị.
Kedu mgbe m kwesịrị iji CoQ10 n'ụtụtụ ma ọ bụ n'abalị?
Ekwesiri ighota na iburu CoQ10 na nso oge ihi ura nwere ike ibute ura nke ufodu ndi mmadu, ya mere, odi nma iwe ya na ututu ma obu n'ehihie (41) Ihe mgbakwunye CoQ10 nwere ike iji ọgwụ ụfọdụ na-emekọrịta ihe, gụnyere ndị na-edozi ọbara, ndị na-agwọ ọrịa ọgwụ na ọgwụ chemotherapy
Kedu ihe Q na-anọchi anya na CoQ10?
Coenzyme Q10 (CoQ10) bu antioxidant nke ahu gi na emeputa. Mkpụrụ ndụ gị na-eji CoQ10 eme ihe maka uto na ndozi.
Kedu otu mitochondria nwere ike isi nwetaghachi?
Na nzaghachi nye nsogbu, mitochondria na-enweta fusion / fission cycles iji mee mgbanwe na gburugburu ebe obibi. N'ihi ya, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịkọwa na a chọrọ plasticity nke mitochondrial dynamics maka mmeghachị neuronal.
CoQ10 enwere quinine n'ime ya?
Coenzyme Q10 bụ otu ezinụlọ nke ihe akpọrọ ubiquinones nke jikọrọ ya na quinine chemical. Ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na quinine na-arịa gị, ị ga-agwa dọkịta gị tupu ịmalite mgbakwunye mgbakwunye kwa ụbọchị na CoQ10.
Gịnị mere ha ji wepụ quinine n'ahịa?
Foodlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ na Ọgwụ na United States (FDA) enyela iwu ka a wepụ ngwaahịa ọgwụ ndị a na-akwadoghị nke nwere quinine, na-ekwu maka nchegbu nchekwa na oke ọnwụ metụtara ha. Omume a bụ akụkụ nke mgbalị ka ukwuu iji wepụ ọgwụ niile na-adịghị mma, ọgwụ na-akwadoghị n'ahịa.
Kedu ụdị coenzyme kachasị mma Q10?
Ubiquinol na-ede 90% nke CoQ10 n'ime ọbara ma bụrụkwa nke kachasị anabata. N'ihi ya, a na-atụ aro ka ịhọrọ site na mgbakwunye ndị nwere ụdị ubiquinol
Kedu ihe Co Q 10 na-eme maka ahụ?
E gosipụtara CoQ10 iji nyere aka melite ahụike obi na usoro shuga ọbara, nyere aka na mgbochi na ọgwụgwọ ọrịa kansa ma belata oge nke mpụga. O nwekwara ike belata mmebi oxyidative nke na-eduga na ike ọgwụgwụ ahụ, mmebi anụ ahụ na ụbụrụ na ọrịa akpa ume.
Ndi PQQ gafere mgbochi ụbụrụ ụbụrụ?
Nkịtị. Pyrroloquinoline quinone (PQQ), ma ọ bụ nke a maara dị ka methoxatin, bụ mmiri soluble, orthodox nke na-agba ịnyịnya na-agbapụ na mbụ nke si na ọdịbendị nke nje methylotropic. … O yiri ka n'ime anụmanụ ahụ dum, PQQ adịghị agafe mgbochi ụbụrụ ọbara.
Kedu ihe kpatara anyị ji chọọ Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)?
Ka ndị mmadụ na-etolite, a na-akpali ụbụrụ ha ịlụ ọtụtụ ihe mmebi iwu. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nbibi nke mbibi na-edeba ihe efu na obere mmetụta dị na ụbụrụ mmadụ, ụfọdụ nbibi na-abụ ihe na-enye aka na ọrịa nhụjuanya na mmerụ na-aga n'ihu nke na-emetụta arịa ọbara. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị mmadụ na-echegbu onwe ha gbasara ahụike ụbụrụ na yabụ, nyocha ahụ, yana ịmara banyere ọrụ ụbụrụ na ahụike, arịwanye elu. Ndị na-eme nchọpụta na-aga n’ihu na-amụ ihe iji mụọ ma chọpụta ihe kemịkal na ogige dị iche iche na-arụ na ahụike ụbụrụ mmadụ. Otu ihe dị otú ahụ nke mere ka ndị nwere mmasị na ndị ọkà mmụta sayensị gburugburu ụwa nwee mmasị na ya bụ Pyrroloquinoline Quinone (PQQ). N'isiokwu a, anyị na-atụle ihe niile enwere ịma banyere Pyrroloquinoline Quinone, gụnyere ọrụ ya, uru ya, njedebe ya na mmetụta ya. Yabụ, gụkwuo.
Belata ikpughe nsị. Nye nri na-echebe mitochondria site na nrụgide oxidative.
Jiri ihe oriri na-edozi ahụ nke na-akwado mmepụta ATP mitochondrial.
Nwere ike ịbawanye mitochondria?
Mmega ahụ bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka ị na-eri oxygen, dị oke mkpa maka okirikiri Krebs nke mitochondria. Dika aru gi na eme ka ike gi di ike, o gha agha ike meputa mitochondria iji choro ihe a.
Bụ PQQ quinine?
Pyrroloquinoline quinine, nke a makwaara dị ka PQQ, bụ cofactor redox na polyphenolic compound nke a na-ahụkarị na nri nri. A na - ahụ ya na cytoplasm nke sel na - enyere aka na mmebi mmeghachi omume na oxidation.
Kedu ihe quinine dị na ya?
Quinine bụ ihe na-elu ilu nke sitere n'ụgbụgbọ osisi cinchona. A na-ahụkarị osisi a na South America, Central America, agwaetiti ndị dị na Caribbean, na akụkụ nke ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ Africa. Emepụtara Quinine dị ka ọgwụ iji luso ọrịa ịba ọgụ.
Kedu ihe Pyrroloquinoline Quinone dissdium nnu (PQQ) na-anọchi anya?
Ajuju ajuju tupu oge eruo (PQQ, nke a na-akpọ mgbe ụfọdụ dị ka ajụjụ nyocha nke ndị na-ebubata ngwaahịa) na-esetịpụrụ ọtụtụ ajụjụ maka ndị nwere ike ịza ajụjụ banyere azịza nke ahụmịhe ha, ikike na ọnọdụ ego ha.
Kedu ihe dị iche na coQ10 na ubiquinol?
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) bụ mmiri quinone nwere ike ịgbanye mmiri nwere ikike mgbochi oxidant. Nnyocha e mere n'oge gara aga na ụmụ oke nri na-eri nri PQQ gosipụtara na ọkwa dị elu nke ọgwụ triglyceride (TG) belatara mgbe mgbakwunye PQQ.
Ọ PQQ adịghị mma?
Nchoputa emere ruo ugbua egosiputala na aru na anabata PQQ ya mgbe ewere ya. Agbanyeghị, ịgabiga usoro onyonyo edepụtara ka enwere ike ibute nsonaazụ ya, dịka isi ọwụwa, ike ọgwụgwụ, na ihi ụra. Ya mere, a na-adụ ndị ọrụ ọdụ ka ha dabere na ogo 40 mg kwa ụbọchị na usoro onunu ogwu, ma ghara ịgabiga oke ọgwụ mg 80 mg. Nke kachasị dị mkpa, n'agbanyeghị na ama ama na Puku na-ahụ maka ịnabata ahụ ike, ọ kacha mma ịga kpọtụrụ dọkịta tupu ịmalite iri nri gị ma ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ ọ bụla preexisting.
Nwere PQQ ka mma karịa CoQ10?
CoQ10 dị ka supercharger nke na-eme ka ọsọ nke ụgbọ oloko dịkwuo mma. PQQ dị ka ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ na-arụ ọrụ mgbe niile iji gbakwunye ụgbọ ala n'ụgbọ oloko gị. Na nchịkọta, CoQ10 na-eme ka ọsọ ọsọ nke ụgbọ oloko ike gị, ebe PQQ na-agbakwunye ma na-ewuli ikike ụgbọ oloko gị ọzọ.
Ego ole ka m kwesịrị ị ?ụ?
Enweghi ezigbo ezigbo ọgwụ nke CoQ10. Ọmụmụ ihe ejirila doses nke CoQ10 sitere na 50 milligram ruo 1,200 milligram na ndị okenye, mgbe ụfọdụ kewara n'ọtụtụ doses na otu ụbọchị. Typicaldị ihe a na-eme kwa ụbọchị bụ milligram 100 na 200 milligram.
CoQ10 na - akpata mkpụkọ ọbara?
Anticoagulants. CoQ10 nwere ike ime ka ọgwụ ndị na-eme ka ọbara gbue, dị ka warfarin (Jantoven), anaghị arụ ọrụ nke ọma. Nke a nwere ike ime ka ọnya ọbara gbaa.
Gịnị kpatara Q10 ji dị oke ọnụ?
Mgbe ahụ, Q10 na - esite n'ọbara banye na sel na n'ime anụ ahụ, a na - emegharị ya ka ọ bụrụ ụdị ume ike ya, ubiquinone. Ubidị ubiquinol ubiQ10 anaghị akwụsi ike ma, n'ihi ya, ọ dị oke ọnụ maka onye na-emepụta capsule Q10 iji rụọ ọrụ.
Ogologo oge ole ka CoQ10 na-arụ ọrụ?
Dika anakpoghachi Ubiquinol na plasma ọbara, otutu ndi mmadu kwesiri ihu ohia nke ike gwuru n’ihe dika ubochi nke ise mgbe ha bidoro mgbakwunye Ọ na-abụkarị n’ime izu abụọ ma ọ bụ atọ, oke nke Ubiquinol ahụ gị ga-erute ogo kacha mma, ọtụtụ ga-enwekwa ihe dị iche na ume n’ime oge a.
Kedu nsogbu ndị ị ofụ CoQ10?
Ihe mgbakwunye CoQ10 na-adị mma ma mepụta nsonaazụ ole na ole mgbe ewere ya dịka enyere ya aka.
Mmetụta dị nro nwere ike ịgụnye nsogbu nri dịka:
Mgbu nke afọ n’afọ
Nausea na vomiting
Mmetụta ndị ọzọ nwere ike ịgụnye:
Isi ọwụwa na dizziness
Skin itching ma ọ bụ rashes
Iwe ma obu iwe iwe
Enwebeghị nchekwa nke iji CoQ10 eme ihe n'oge ime nwa na inye ara ara. Ejila CoQ10 ma ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ na-enye ara ara na-enweghị nnabata dọkịta gị.
Ndi pyrroloquinoline quinone dika quinine?
Pyrroloquinoline quinine, nke a makwaara dị ka PQQ, bụ cofactor redox na polyphenolic compound nke a na-ahụkarị na nri nri. Enwere ike iri PQQ dị ka ihe mgbakwunye nri iji nyere aka na ike ọrụ cellular yana ahụike mitochondrial na ịgbachitere ahụ megide nrụgide oxidative.
Nwere PQQ dị mma maka obi?
PQQ na-edozi ahụ nwere ike igbochi ọdịda obi. Nchoputa ohuru ohuru ohuru, nke edeputara na mbiputa ohuru nke Cardiovascular Diagnosis & Therapy, kwubiri na ihe di mkpa Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) nwere ike rụọ oke na mgbochi nke nkụda obi na-adịghị ala ala (CHF).
Nwere ike ị were PQQ mgbe ị dị ime?
Nsonaazụ anyị na-egosi na mgbakwunye na PQQ, ọkachasị n'oge ime ime na lactation, na-echebe ụmụ site na mmemme mmepe mmepe nke WD nke ịba ọgaranya na-egbu egbu ma nwee ike inye aka belata ọrịa na-aga n'ihu nke NAFLD na ọgbọ ọzọ.
Ọ PQQ adịghị mma maka ndị ọrịa mamịrị?
Ihe ndị a na-arịa ọrịa shuga nke PQQ na-akwado ya site na ngwongwo antioxidative ya, dịka PQQ abụghị nanị na-egbochi anụ ahụ LPO kamakwa ọ na-eme ka insulin na HDL dịkwuo mma, yana antioxidants cellular.
Kedu ka ị si eme ike mitochondria?
Wzọ 10 iji bulie Mitochondria gị
Rie obere kalori.
Inweta Mmeju PQQ.
Tụfuo carbs a nụchara anụcha dị ka soda, achịcha ọcha na achịcha dị iche iche.
Rie protein dị ka anụ ehi na ahịhịa na-ata ahịhịa
Na-ebute ụzọ na-ehi ụra awa 8 kwa abalị.
Belata nrụgide site na usoro izu ike dịka ntụgharị uche ma ọ bụ ịhịa aka n'ahụ kwa ụbọchị.
Gbalịa ọgwụgwọ okpomọkụ.
Mee ihe dịkarịa ala minit 30 kwa ụbọchị.
Rie nri ndị nwere antioxidant nwere resveratrol dị ka chocolate gbara ọchịchịrị.
Rie isi mmalite nke omega-3s na alpha-lipoic acid.
Kedu ihe bụ PQQ antioxidant?
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) bu ihe omuma ohuru nke ohuru n’ime mmiri ara mmadu. PQQ bụ antioxidant dị irè na-echebe mitochondria megide nrụgide oxidative-na-ebute peroxidation lipid, protein carbonyl guzobere na inactivation nke mitochondrial respiratory tract.
Gịnị bụ vitamin PQQ?
PQQ bụ ihe okike dị na nri dị iche iche. Ọ na - arụ ọrụ dịka antioxidant ma na - akwado ọrụ mitochondrial siri ike. A na-ewere ya dị ka mgbakwunye iji kwalite ọrụ ụbụrụ.
Kedu ihe bụ PQQ 20?
Pyrroloquinoline quinone ma ọ bụ PQQ bụ ihe nchọpụta vitamin dị nso a na-ahụkarị na nri osisi. Achọpụtara ya nke mbụ bụ cofactor maka nje bacteria dịka nke B Vitamin na-emetụta mmadụ. PQQ nwere antioxidant na B-vitamin dika oru, ya na otutu uru di na aru na aru.
Kedu nri ndị nwere PQQ?
Eleghị anya ị ga-eri obere PQQ kwa ụbọchị. A na-ahụ ya n'ọtụtụ obere nri dị ka akwụkwọ nri, ose na-acha akwụkwọ ndụ, kiwifruit, tofu, natto (soybean fermented), tii na-acha akwụkwọ ndụ, na mmiri ara ehi mmadụ. Agbanyeghị, anyị anaghị enweta ọtụtụ PQQ site na nri - naanị ihe ruru 0.1 ka 1.0 milligrams (mg) kwa ụbọchị.
Kedu nri na-abawanye mitochondria?
Fọdụ n'ime ihe ndị a dị mkpa gụnyere L-carnitine na creatine, nke dị mkpa maka inye ume na mitochondria. Nwere ike nweta ọtụtụ site na itinye nri ehi, bison, àkwá, anụ ọkụkọ, agwa, mkpụrụ, na mkpụrụ na nri gị.
Ibu ọnụ na-abawanye mitochondria?
Nnyocha ahụ chọpụtara na ibu ọnụ na-eme ka mitochondrial na-arụkọ ọrụ na peroxisomes, ụdị ụdị nke nwere ike ịba ụba acid acid, usoro bụ isi nke metabolism.
Kedu ihe omume na-abawanye mitochondria?
Ihe omumu ohuru choputara na mmega - na karia ihe omumu nke ihe omumu nke ihe ndi ozo dika biking na ije - mere ka sel mekwuo protein maka ike ha na-emepụta mitochondria na protein ha na-ewu ribosomes, na-akwụsị ịka nká na ọkwa cellular. .
Nwere ike ịrụkwa mitochondria mebiri emebi?
E kpebisiri ike na iji gbochie mmebi, mitochondria nwere ụzọ nrụzi akọwapụtara nke ọma yiri nke ntọala ahụ, otu n'ime ha bụ: nrụzi mgbatị (BER), mmezi adịghị mma (MMR), nkwụsịtụ otu nkwụsị (SSBR), microhomology-mediated ọgwụgwụ njedebe isonyere (MMEJ), na ikekwe homology recombination.
Kedu ihe mgbakwunye na-abawanye mitochondria?
Oral ihe mgbakwunye anụ ahụ nwere membrane phospholipids, CoQ10, microencapsulated NADH, l-carnitine, α-lipoic acid, na nri ndị ọzọ nwere ike inye aka weghachite ọrụ mitochondrial ma belata ike gwụrụ nke ndị ọrịa na-arịa ọrịa na-adịghị ala ala.
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) Na-eji.
Quinone nke Pyrroloquinoline (PQQ) e buru ụzọ chee na ọ bụ vitamin. Otú ọ dị, nnyocha ndị ọzọ mere ka ọ bụrụ ihe na-abụghị vitamin nke na-eme ma na-eri nri yana anụ ahụ na-eri anụ. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịkọwa na n'agbanyeghị na enweghị nyocha nyochara njikọ anụ ahụ ya, ihe dị ka 100-400 nanogram nke PQQ na-etolite na ahụ mmadụ kwa ụbọchị. O di nwute, ego a ezughi iji kwado oru di iche iche nke egosiputara PQQ. Yabụ, a na-adụkarị ndị mmadụ ọdụ ka ha rie PQQ n'ụdị mgbakwunye nri.
Nri nri na PQQ abụghị naanị na-eduga n’ibelata uto kama ọ na-ebelata ọrụ mmekọahụ. N'otu aka ahụ, ọtụtụ ọmụmụ ejirila PQQ mee ihe na uto uto na mitochondrial biogenesis. N'okwu dị mfe, ahụ mmadụ nwere ike irite uru na PQQ ka ọ na-akwalite ọnụ ọgụgụ na ọrụ nke mitochondria, si otú ahụ na-eduga n'ọtụtụ ike ka mma. A makwaara PQQ ka ọ bụrụ onye nnọchi anya REDOX dị mma ma gbochie ịchụ onwe ya na polymerization.
Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) Uru.
Mmasị na Pyrroloquinoline Quinone amụbawo nke ukwuu n'ime afọ ole na ole gara aga ka ejikọtara ogige a na ọtụtụ uru. N'ebe a, anyị na-ele anya uru Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) ya kachasị mkpa.
① PQQ ejikọtara ya na Ọfụma Ike ya
Mitochondria bụ obere akụkụ ahụ dị n'ime sel ndị a na-akpọkarị ha ụlọ ike dị ka ha na-ewepụta ume site na nri, si otú a na-enye ike mkpụrụ ndụ ga-arụ ọrụ ha. Pyrroloquinoline Quinone na-enye ohere mitochondria ịrụ ọrụ nke ọma, si otú a na-eduga n'ịbawanye mmepụta ume n'ime sel. Ike a dị elu n'ime mkpụrụ ndụ na-emesị chọta ahụ ya dum, na-eduga n'inwe ume na ume zuru ezu. Ọ bụrụ na ị na-enwetakarị ike ọgwụgwụ ma ọ bụ obere ume, ihe mgbakwunye PQQ ga - enyere gị aka ịkwalite ogo ike gị. (1) Kwusara: Mmetụta nke Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)
② Ọ Na-eme Ka Nkụba Na-akpata Nkụzi
Pyrroloquinoline Quinone na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ cellular na na usoro ahụ, na-emetụtakarị ihe ndị na-eto eto na-emetụta. Nke a, n’aka nke ya, na-eduga na mmepe mmepe nke sel neuronal na irighiri akwara na anụ ahụ dị n’ime anụ ahụ. Yabụ, PQQ na - ejikọtakarị ya na ụbụrụ ụbụrụ dị mma. Ebe ọ bụ na a na-ejikọkarị dysregulation NGF na ọrịa Alzheimer, a na-enyekarị ihe mgbakwunye PQQ iji nyere aka n'ịgwọ ọnọdụ ndị metụtara afọ.
Ejikọtara ③PQQ na Improra Ka Mma
Otu nnyocha nyochara mmetụta PQQ riri ụra ndị mmadụ. Nnyocha ahụ nyochara ndị sonyere n'ime izu asatọ wee chọpụta na ndị na-a consumedụkarị nri izu asatọ nwere ike ihi ụra nke ọma. Nnyocha ahụ gosikwara na oriri PQQ na-ebelata cortisol, hormone nrụgide nke na-egbochi ụra nkịtị. Ọ bụ ezie na a chọkwuru nnyocha na mpaghara a, nyocha mbido na-ejikọ nri PQQ n'ụzọ doro anya na ụra ka mma.
PQQ na-akwalite ọdịmma niile site na mbenata nrụgide Oxidative
A maara PQQ maka nnukwu ihe na-egbochi ọgwụ oxidant - ọ na-ebelata ogo protein protein C-reactive na IL-6 n'ime ahụ, ha abụọ bụ ndị kpatara mbufụt. Njirimara ya na-eme ka PQQ bụrụ onye agha dị irè megide nrụgide oxidative, nke bụ ihe kpatara ọtụtụ ọrịa na-adịghị ala ala, dị ka carcinomas na ọrịa neurodegenerative. PQQ na-ebelata nrụgide site na mbenata mmebi nke oxyidative kpatara site na radicals free na imezi metabolism.
⑤ PQQ na Nchikota na CoQ10 Meziwanye Ọrụ Nchekwa
Ejikọtara ihe oriri PQQ na nrụgide belatara, nke n'aka nke ya, na-eduga n'ịrụ ọrụ nghọta na mmelite nke nchekwa. Emeela nnyocha ọmụmụ iji mụọ otu PQQ si emetụta ebe nchekwa. Nnyocha nyocha chọpụtara na PQQ na-arụkọ ọrụ na CoQ10, coenzyme nke na-arụ ọrụ dị ka antioxidant nke na-eme ka metabolism na-echebe mkpụrụ ndụ site na mmebi. PQQ na CoQ10 egosila iji melite ọrụ ebe nchekwa.
Uru ndị ọzọ nke PQQ
N’ihe ndị a kpọtụrụ n’elu, PQQ na-enyekwa ụfọdụ uru ndị ọzọ nyocha nke ugbu a. Dịka ọmụmaatụ, nyocha nke mbụ gosiri na oriri PQQ na-eduga n'ịba ụba nke ọmụmụ.
Ebee ka ịzụta Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) ntụ ntụ na nnukwu?
Ọ bụrụ n’ị bụ onye nrụpụta ahụike na-etinye aka na nrụpụta Pyrroloquinoline Quinone na ọnụ ọgụgụ buru ibu, o doro anya na ị ga-achọrịrị onye na-eweta ngwaahịa nwere ike inye gị PQQ ntụ ntụ na nnukwu. Chọta onye na-eweta ngwaahịa nke a ga-atụkwasị obi maka ịdị mma na ntụkwasị obi bụ isi ihe maka ịmalite azụmahịa na-aga nke ọma.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ka zụta Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) ntụ ntụ na nnukwu, ebe kachasị mma maka ịzụ ahịa bụ Cofttek. Cofttek bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na-emepụta ọgwụ ndị dị elu nke e guzobere na 2008 ma na-arụ ọrụ na ụkpụrụ nke "Quality Basis, Customer First, Honest Service, Mutual Benefit". Companylọ ọrụ ahụ kwadoro ule zuru oke, nke na-enye ya ohere ịnye ndị ahịa ya ọrụ dị elu na ngwaahịa. Ugbu a Cofttek na-enye ngwaahịa ya ndị ụlọ ọrụ ọgwụ na China, Europe, India na North America. PQQ ntụ ntụ nke ụlọ ọrụ na-eweta na-abịa na nchịkọta nke kilogram 25, nke zuru oke iji mepụta ọtụtụ batches nke ngwaahịa gị. Karịsịa, Cofttek nwere ndị otu njikwa nwere ahụmahụ na ndị otu R & D mbụ. Ya mere, ị nwere ike ijide n'aka na ị ga-enweta nnyefe gị niile nke ngwaahịa dị oke mma na ejiji n'oge. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ịzụta Pyrroloquinoline Quinone na nnukwu, kpọtụrụ ndị otu na ọrụ cofttek.
(1) Kwusara:Mmetụta nke Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) Mgbakwunye na arụmọrụ mmega ahụ na Indices nke Mitochondrial Biogenesis na ụmụ nwoke na-agụghị akwụkwọ
(2) Mmetụta neuroprotective nke pyrroloquinoline quinone na ọnya ụbụrụ ụbụrụ
(3) Ọganihu na-adịbeghị anya na ọmụmụ banyere uru ahụike nke pyrroloquinoline quinone
(4) Mmetụta nke Mgbakwunye Antioxidant Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt (BioPQQ ™) na Ọrụ Mmetụta
(5) Pungroloquinoline Quinone
(6) Njem inyocha egt.
(7) Oleoylethanolamide (oea) - anwansi anwansi nke ndu gi.
(8) Anandamide vs cbd: kedu nke ka mma maka ahụike gị? Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ha!
(9) Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nicotinamide riboside chloride.
(10) Mmeju nke Magnesium l-threonate: uru, onunu ogwu, na ihe ndi ozo.
(11) Palmitoylethanolamide (agwa): uru, onunu ogwu, ojiji, mgbakwunye.
(12) Top 6 uru uru nke resveratrol Mmeju.
(13) Ihe 5 kacha elu na-ewere phosphatidylserine (ps).
(14) Ihe kacha mma nootropic nke alpha gpc.
(15) Ngwunye kachasị mma nke ịka nká nke nicotinamide mononucleotide (nmn).
Ahuru m pqq n'anya. M ji ya kemgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2yrs. Maka m, ọ na - eme ka ume dị ike. Ọ bụghị n'ụzọ na-akpali akpali kama ọ na-eme ka usoro ọgụgụ isi na ike nkịtị sikwuo ike. Ana m eji ya kwa ụbọchị 10 ma ọ bụ 20 mg w 100mg ubiquinol. Ana m akwado ya.
Ana m ewere 40 mg otu ụbọchị. Ike m na-agbanwe agbanwe kwa ụbọchị, echekwara m na ọ na-eme ka m hie ụra nke ọma yana ashwagandha, magnesium, na l-theanine.
E kwuru Pyrroloquinoline Quinone na nyocha maka otu esi gwọọ site na ịda mba. Ọ na - akpali biogenesis nke mitochondria ọhụrụ ma na - arụkọ ọrụ na CoQ10 maka nrụzi sel. Achọpụtara m nnukwu ọdịiche na ike na mgbe ụfọdụ ọnọdụ mgbe m were ya.